GOS oo Tababar Muqdisho uga furtay Tababarayasha kubadda Kolayga – Radio Muqdisho
GOS oo Tababar Muqdisho uga furtay Tababarayasha kubadda Kolayga
Tababarkan ay soo qaban qaabisay Guddiga Olombika Somaaliyeed oo kaashanaya Olympic Solidarity ayaa ka furmay Magaalada Muqdisho Tababarkan ayaa waxaa bixinaya qabiir ka socda Xiriirka kubadda Kolayga Adduunka FIBA .
Xafladda Furitaanka oo si heer sare loo soo agaasimay waxaa kasoo qeyb galay masuuliyiin ka kala socotay Wasaaradda Dhallinyarada iyo Isboortiga , Guddiga Olombikada Soomaaliyeed iyo XSKK, waxaana ugu horreyn goobta ka hadlay Guddoomiyaha XSKK Mudane Cabdullaahi Nuur Maxmed Cadaani waxuuna sheegay in tababarkan uu qeyb ka yahya orsho sanadeeka Xiriirka uu uguo talo galay Horumarinta macallimiinta isagoo kaashanaya GOS.
Tababarkan ayaa sare loogu qaadaya aqoonta macallimiinta kubadda Kolayga dalka si ay usoo saaraan kooxo tayo leh, sida heerarka Iskuulada, Degmooyinka iyo gobollada dalka, Olympic Solidarity , IOC, FIBA , iyo Guddiga Olombika Soomaaliyeed oo u istaagay suurto-gelinta Koorsadan .
Macalinka tababarkan Bixinaya oo u dhashay dalka Masar ,Samy Elsharony, oo xaflada ka hadlay ayaa yiri” Waan ku faraxsanahay inaan imaado Soomaaaliya oo dalkayga oo kale ah isla markaana taariikh wanaagsan ku leh kubadda Kolayga qaaradda Afrika’
Madaxa Arimaha Xiriiirada GOS Xaaji Maxamed Axmed Colow ayaa dhankiisa tilmaamay in tababarkan uu ka mid ah qorshaha GOS ay sanad kasta ugu talo gashay horumarinta Qaybaha kale gedisan ee xiriira Isboortiga dalka.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Dhalinyarada Isboortiga Isaaq Xaaji Jimcaale oo tababarka furay, ayaa GOS ku amaanay dadaalka ay ugu jirto soo saarista macallimin ay tayenayso Aqoontooda.
Warmurtiyeed laga soo saaray shirka Wadatashiga iyo Xoojinta habka Mideynta Canshuuraha dalka oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyay+Sawirro